China High ekweghị 6061 6082 7075 2024 aluminum profaịlụ maka ulo oru eji emepụta na suppliers | Huifeng
Nnukwu ike 6061 6082 7075 2024 profaịlụ aluminom maka iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Nkọwapụta nke profaịlụ aluminom
Ngwakọta: 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A, 6082, 6463,
7020, 7075 wdg
Udi: Dị ka ndị ahịa ịbịaru
Mkpa ọgwụgwọ Mill imecha, anodized, PVDF sere, Polishing
Njupụta nke profaịlụ aluminom bụ naanị 2.7g / cm3, nke dị ihe dị ka 1/3 nke njupụta nke nchara, ọla kọpa ma ọ bụ ọla (7.83g / cm3, 8.93g / cm3, karị). N'okpuru ọtụtụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi, gụnyere ikuku, mmiri (ma ọ bụ mmiri nnu), petrochemicals na ọtụtụ usoro kemịkalụ, aluminom nwere ike igosi nguzogide corrosion magburu onwe ya.
A na-ahọrọ profaịlụ aluminium n'ihi oke ọkụ eletrik ya. Na ndabere nke nha anya kwesiri, ihe nketa nke aluminom dị nso na 1/2 nke ọla kọpa.
Igwe mmega ahụ
Igwe ọkụ nke aluminom alloy bụ ihe dị ka 50-60% nke ọla kọpa, nke bara uru maka imepụta ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ, ihe ndị na-ekpo ọkụ, arịa nri, na isi isi ụgbọ ala na radiators.
Nkọwa profaịlụ Aluminom bụ nke na-abụghị ferromagnetic, nke bụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ eletriki na eletriki. Ihe profaịlụ aluminom abughi nke a na-ere ere, nke di nkpa maka ngwa ndi mmadu na-aru ma obu ndi jikoro ya na ihe ndi ozo.
Arụ ọrụ nke profaịlụ aluminom dị mma. N'ihe dị iche iche nke aluminom dị iche iche na nkedo aluminom, yana na steeti dị iche iche na alloys ndị a nwere mgbe emepụtachara ha, njirimara igwe na-adịgasị iche iche, nke chọrọ ngwaọrụ igwe pụrụ iche ma ọ bụ teknụzụ.
Specificdị ike a kapịrị ọnụ, na-enye ike, ike ma rụọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-achịkwa mgbanwe na nrụrụ nwere ike.
Aluminom nwere nnukwu recyclability, na njirimara nke aluminom emegharịrị fọrọ nke nta ka ọ ghara iche na isi aluminom.
Site na nzube
1. Architectural aluminom profaịlụ (kewara abụọ nke ọnụ ụzọ na windo na ákwà mgbochi mgbidi).
2. Aluminom profaịlụ nke radiator.
3. Izugbe ulo oru aluminom profaịlụs: A na-ejikarị eme ihe maka mmepụta na mmepụta ihe, dị ka akụrụngwa na akụrụngwa, ọkpọ nke ogige ahụ, na ụlọ ọrụ ọ bụla na-ahazi ebu ahụ dịka akụrụngwa akụrụngwa nke ha, dị ka eriri eriri ndị na-ebu mgbakọ, ndị mbuli elu, ndị na-ewepụta ihe, Ngwa ule , shelf, wdg, na-ejikarị ya na ụlọ ọrụ igwe eletriki na ụlọ dị ọcha.
4. Aluminom alloy profaịlụ maka ụgbọ okporo ígwè Ọdịdị: tumadi na-eji na rụpụta ụgbọ okporo ígwè ozu.
5. Na-agbago profaịlụ aluminom iji mee aluminom alloy foto okpokolo agba, na-arịgo ihe ngosi dị iche iche na ihe osise eji achọ mma.
Dị ka alloy mejupụtara
Enwere ike kewaa ya na alloy ọkwa aluminom profaịlụ dika 1024, 2011, 6063, 6061, 6082, 7075, nke usoro 6 kachasị. Ihe dị iche n'etiti akara ule dị iche iche bụ na akụkụ nke ihe igwe dị iche iche dị iche, ewezuga profaịlụ aluminom a na-ejikarị eme ọnụ ụzọ na windo Dịka ọmụmaatụ, na mgbakwunye na profaịlụ aluminom dịka 60 usoro, usoro 70, usoro 80, usoro 90, Usoro mgbochi ákwà mgbochi, profaịlụ aluminom ụlọ ọrụ mmepụta ihe enweghị ụdị ihe atụ doro anya, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-ahazi ha dịka eserese nke ndị ahịa.
Dị ka ọgwụgwọ elu ala si dị
1. Anodized aluminom
2. Electrophoresis ntekwasa aluminom
3. Powder gbara aluminom
4. Osisi ọka na-ebufe aluminom
5. Fluorocarbon gbara aluminom
6. Aluminom na-egbu maramara
Nke gara aga: Emeputa elu mma 10-260mm 6061-t6 aluminum mmanya
Osote: 5083 embossed aluminum mpempe akwụkwọ
aluminom profaịlụ maka ákwà mgbochi
profaịlụ aluminom anodized
ulo oru aluminom profaịlụ
ike ntekwasa aluminom profaịlụ
ala shutter aluminum profaịlụ
T-Oghere aluminom profaịlụ
OEM alloy 6061/6082/6063/6005 ulo oru ...